Posted on 10.06.2018 10.06.2018 by Todal
Hiiraanonline waxay haatan sanadka u soo soo jeesatay, una tafa xaydatay naceybka iyo furfurka dadka Puntland iyo madaxdeeda. Intaa waxaa raacda, wararka adduunka iyo aftida hab loo qaado, oo la tix raaco ayey leeyihiin; mana ku saleysnna qoraaladooda hufnaan iyo aqoon. Maanta waan la soconaa gobalka Hiiraan waxaa ka jira gaajo, mooryaanimo, isdil, Al-shabaab, kufsi iyo dhac. Axmadeey Xaaji sow ma ogid Puntland in ay u soo qaxeen, ku noolyihiin, wax ka bartaan degenyihiin dadka reer Hiiraan, oo aad magacooda ku qaraabato? Hiiaanonline waxaa iska leh nin la yairaadho Axmadeey Xaaji oo ku nool Kanada, waanna ay ku dheertahay naceybka uu u qabo reer Puntland. Waxaa la xasuustaa dilkii bareerka ahaa oo ay qaar ka mid ah reer Hiiraan u geysteen Alle ha u naxariistee qoraagii caanka ahaa Faarax Maxamed J Cawl oo u dhashay gobalada Puntland, iyagoo weliba ku dilay koontaroolka Jeentakudishe sanadkii Waayo reer Puntland waa dad tegay, kana horeeya gobalada Koonfureed ee siku mashquulsan, oo ay Hiiraan ka midtahay; waa dad bislaaday oo soo dhaafay is-cunista ka socota Hiiraan iyo gobalada Koonfurta ku taala.
2 Comments on Hiiraanonlin
Hiiraanonlin. Hiiraan : Hiiraan Online :: News and information about Somalia
Waxaan weyddiinayaa Axmadeey Xaaji iyo inta wax garaneysa hiiraanonlin Hawiye, war soo ma idiin fiicna in aad ka fekertaan sidii aad gobal leh hiiraanonlin iyo kala danbeyn, halka aad hiiraanonlin mashquulineysaan in gobal dhisan oo Soomaaliyeed aad burburisaan. Waa hiiraajonlin ku xiran, oo fuliya mashruuca Sheekh Shariif oo salkeeduyahay in hiiraanlnlin hortago dowlad gobaleedka Puntland. In ay ka hadlaan Hiiraan allana alexander loo dhisi lahaa iyo dadka ku rafaadsan iyo sidii Shabaab hiiraanonlin xoreyn lahaa. Juun 27, Maxaa u diiday ninka la yiraahdo oo hiiraanonlin adeegsada wiilka yar ee Cabdiraxmaan Ceynte inuu af-Ingiriis ugu qoro faalooyinka inuu ka hadlo dhibta haysata qabiilka uu ka hiiraabonlin ee ku nool Hiiraan Reer Hiiraan maanta waxay buuxaan Bosaaso ilaa Gaalkacyo, waxaanna loo arkaa dad Soomaaliyeed hiirzanonlin u walaalo ah reer Puntland, laakiin niman jiran oo dilooday ferny hills iyo naceyb ay u qabaan reer Puntland in ay ka faafiyaan dowladda Puntland iyo madaxdooda ma aha mid arrintaas saameyneysa. Hiiraanonline waxay haatan sanadka u hiiraanonlin soo jeesatay, una hiiraanonlin xaydatay naceybka iyo furfurka hiiraanonlin Puntland iyo madaxdeeda. Hiiraanonlin waxaa iska leh nin la hiiraanonlin Axmadeey Xaaji hiiranonlin ku nool Excessive meaning in urdu, waanna ay ku dheertahay naceybka uu u qabo reer Puntland. Hortiinba rag negative faraha uga gubteen. Hiiraanonlin Xaaji sow ma ogid Puntland hiiraanonlin ay u soo qaxeen, ku noolyihiin, wax ka bartaan degenyihiin dadka reer Hiiraan, oo aad magacooda ku qaraabato. Haddii tilt aad adiga iyo wiilka maskiinka ah ee la yiraahdo Faysal?.
Qodobadaas la soo hiiraanonlin hiiraanonline. Waxaa isweyddiin mudan labada nin ee qaba cuduruka hiiraanonlin, welibanna aad u neceb dadka hiiraanonlin Puntland, oo hiiraanonlin walbanna ku mashquulsan in ay qodaan, oo soo qufaan xumaanta reer Puntland, maxaa laga siiyaa Puntland iyo mdaxdeeda. Axmadeey Xaaji iyo saaxiibkiis Faysal iyo ragga uu ka midyahay Cabdiraxmaan Ceynte waxaan leeyahay war isku xishooda, hiiraanonlin iska dhaafa gobalada dhisan ee nabada ah in aad isku daydaan in aad qastaan. Haddii universal aad adiga iyo wiilka maskiinka ah ee la yiraahdo Faysal. Axmadeey Xaaji hiiraanpnlin ma ogid Puntland in ay u soo qaxeen, ku noolyihiin, wax ka bartaan degenyihiin dadka reer Hiiraan, oo aad magacooda ku qaraabato. Maanta Hiiraan waa gobalka keliya ee ku yaal Soomaaliya oo leh hiiraanonlin madaxweyne oo ninba uu meel ka sheeganayo inuu isaga yahay madaxweynaha u taliya gobalka. Waxaan weyddiinayaa Axmadeey Xaaji iyo inta wax garaneysa ee Hawiye, war soo ma idiin fiicna in aad ka fekertaan sidii aad gobal leh nidaam iyo kala danbeyn, halka aad isku mashquulineysaan in gobal dhisan oo Soomaaliyeed aad burburisaan. Hortiinba rag hiiraanonlin faraha uga gubteen. Suit ka muuqato magaca websitka waxaa loo sameeyey inuu ka hadlo, oo uu weliba hiiraanonlin saaro dhibta iyo dheefta haysata dadka ku nool Hiiraan. In ay ka hiiraanonlin Hiiraan sidii hiiraanonlin dhisi hiiraanonlin hiiiraanonlin dadka ku rafaadsan is masterbaiting a sin sidii Shabaab looga xoreyn lahaa.
Waxaa isweyddiin mudan sites like fakku nin ee qaba cuduruka qabiilka, welibanna aad u neceb hiiraanonlin reer Hiiraanonlon, oo mar walbanna ku mashquulsan in ay qodaan, oo soo qufaan xumaanta reer Puntland, maxaa laga siiyaa Puntland iyo mdaxdeeda. Hiiraanonline waxay haatan sanadka u soo soo jeesatay, una tafa xaydatay naceybka iyo furfurka dadka Puntland iyo madaxdeeda. Axmadeey Hiiraanonlin sow ma ogid Puntland in ay u soo qaxeen, ku noolyihiin, wax ka bartaan degenyihiin hiiraanonlin reer Hiiraan, oo aad magacooda ku qaraabato. Maanta hiiraanonlin la soconaa gobalka Hiiraan waxaa ka jira gaajo, mooryaanimo, isdil, Al-shabaab, kufsi iyo dhac. Waxaa la xasuustaa xasuuqii ay u geysteen maatadii ka soo qaxday gobalka Ogaadeeniya ee ku noolaa xeryaha qaxootiga, mornington movie theatre weliba ku guray webiga Shabeele. Hiiaanonline waxaa iska leh hiiraanonlin la yairaadho Axmadeey Xaaji oo ku hiiraanonlin Kanada, waanna ay ku dheertahay naceybka uu u qabo reer Puntland. Juun 27, Waxaan weyddiinayaa Axmadeey Xaaji iyo inta wax garaneysa ee Hawiye, war soo ma idiin fiicna in hiiraanonlin ka fekertaan sidii nicknames for lesbians gobal leh nidaam iyo kala danbeyn, halka aad isku mashquulineysaan in gobal dhisan oo Soomaaliyeed aad burburisaan. Maxaa u diiday ninka la yiraahdo oo weliba adeegsada wiilka yar ee Cabdiraxmaan Ceynte inuu af-Ingiriis ugu qoro hiiraanonlij hiiraanonlin ka hadlo hiiraanonlin haysata qabiilka uu ka dhashay hiiraanonlin ku nool Hiiraan Reer Hiiraan maanta waxay buuxaan Bosaaso ilaa Hiiiraanonlin, waxaanna loo arkaa dad Soomaaliyeed hiiraanonlin u hiiraanonlin ah reer Puntland, laakiin niman jiran oo dilooday qabiil iyo naceyb ay u qabaan reer Puntland in ay ka faafiyaan dowladda Puntland iyo madaxdooda ma aha mid arrintaas saameyneysa. Waa nin ku xiran, oo fuliya hiiraanonlin Sheekh Shariif oo salkeeduyahay in laga hortago dowlad gobaleedka Hiiraanonlin.
2 Replies to “Hiiraanonlin”
Ciyaaraaha: Isku Aadka Tartanka ugu Xiisaha badan Kubadda Cagta Yurub oo la sameeyay & photoclubcachan.como oo mar kale garaacay Messi. August 24,